२०७५ भदौ ४ सोमबार, काराकास। सङ्घर्षरत भेनेजुएलाबासीहरु राष्ट्रपति निकोलास मदुरोले देशभित्रको उच्च मुद्रास्फिती नियन्त्रण गर्न सार्वजनिक गरेको क्रान्तिकारी नयाँ योजनाबाट किंकर्तव्यबिमुढ भएका छन्। तेलको धनी तर नगदको कमी रहेको भेनेजुएला अहिले उच्च मुद्रास्फितीबाट बेचैन अवस्थामा छ। ... बाँकी अंश»
इन्डोनेसियामा भूकम्प रोकिएन, ४३३ को मृत्यु
२०७५ भदौ ४ सोमबार, काठमाडौं । दुर्इ साताअघिमात्र ७.० म्याग्निच्युडको विध्वंसकारी भूकम्प गएको दुई सातामै इन्डोनेसियामा पुन: शक्तिशाली भूकम्प गएको छ । ... बाँकी अंश»
पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री खानले राखे छिमेकीसँगको सम्बन्धलाई प्राथमिकतामा
२०७५ भदौ ४ सोमबार, काठमाडौं । पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री इमरान खानले छिमेकी मुलुकहरुसँगको सम्बन्ध आफ्नो प्राथमिकतामा रहेको बताएका छन् । ... बाँकी अंश»
दुई कोरियाको पुनर्मिलन, सकियो तयारी
२०७५ भदौ ४ सोमबार, काठमाडौं । दक्षिण कोरियाका नागरिकहरु उत्तर कोरियामा रहेका आफ्ना आफन्तहरु भेट्नका लागि उत्तर कोरिया पुगेका छन् । ... बाँकी अंश»
केरला बाढी : मृत्यु हुनेको सङ्ख्या ३ सय ५७ पुग्यो
२०७५ भदौ ३ आइतबार, थिस्सुर, भारत। दक्षिण पश्चिम भारतमा विगत केही दिनदेखि निरन्तर परेको बर्षाका कारण आएको बाढीमा परी मृत्यु हुनेको सङ्ख्या ३ सय ५७ पुगेको छ। पछिल्लो २४ घण्टामा ३३ जनाको मृत शरीरलाई डुबान क्षेत्रबाट निकालिएको अधिकारीहरूले बताएका छन्। ... बाँकी अंश»
भूटानको निर्वाचन आयोगद्वारा अक्टोबर १८ मा चुनाव गर्ने घोषणा
२०७५ भदौ ३ आइतबार, थिम्पु, भूटान। भूटानको निर्वाचन आयोगले आगामी अक्टोबरमा आम निर्वाचन गर्ने घोषणा गरेको छ। उक्त निर्वाचनपूर्व भूटानमा राजनीतिक पार्टीको मान्यता पाएका चार दलमध्ये आगामी सेप्टेम्बर १५ मा पहिलो चरणको निर्वाचन हुनेछ जसबाट दुईवटा दलमात्र अर्को चरणका लागि चयन भएर आउने छन्। ... बाँकी अंश»
२०७५ भदौ ३ आइतबार, काबुल, अफगानिस्तान। अफगानिस्तानका राष्ट्रपतिले युद्धविरामको घोषणा गरेका छन्। युद्धविरामको एकतर्फी रूपमा घोषणा गरेका राष्ट्रपति अर्सफ गानीले शान्तिका लागि तयार भएमा कुनै पनि समय सम्झौता हुनसक्ने बताएका छन्। ... बाँकी अंश»
५ सय वर्ष कसरी बाँचे रूसी राष्ट्रपति पुटिन ? के हो खास रहस्य ?
२०७५ भदौ ३ आइतबार, एजेन्सी । सामाजिक सञ्जालमा पछिल्लो समय रूसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनको उमेरको समाचार भाइरल भइरहेको छ । भनिन्छ, पुटिन विश्वमा कम्तिमा पनि ५०० वर्ष देखि फरक-फरक रुपमा रहे । सो समचारलाई पुष्टी गर्न अलग-अलग तस्वीर समेत पोप्ट भए । जसमा उनको तुलना मोनालिसाको पेन्टिंग र रूसी सैनिकसँग गरिएको छ । ... बाँकी अंश»
बिहे गर्ने केटा नपाएपछि ब्राजिलका युवतीको हारगुहार!
२०७५ भदौ ३ आइतबार, एजेन्सी। उमेर ढल्किँदै जाँदा बिहे गर्ने एउटा पनि केटा नपाएपछि सहरभरिका केटीहरुले सामूहिक रुपमा केटा पाउँ भन्दै हारगुहार गर्न थालेका छन्। यो ब्राजिलको घटना हो । ब्राजिलको नोइभा डो कोर्डेरियो गाँउ एकजना पनि अविवाहित पुरुष छैनन्। तर ६ सय जना अविवाहित महिला छन्। ती मध्ये अधिकांस ३५ वर्ष मुनिका तरुनी हुन। ... बाँकी अंश»
संसारका सबैभन्दा विलासी तथा आरामदायी विमानहरु
२०७५ भदौ ३ आइतबार, एजेन्सी । सन् १९०३ डिसेम्वर १८ को दिनमा मानवजातिको आकाशमा उड्ने सपना पुरा भएको थियो। उक्तदिन 'राइट' दाजुभाइले पहिलो पटक 'द फ्लायर' नामक विमान उडाएका थिए। ... बाँकी अंश»
२०७५ भदौ ३ आइतबार, सिओल। उत्तर कोरियाली नेता कीम जोङ–उनले आफ्नो देशमाथि अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबन्ध नहटाइएको भन्दै कडा शब्दमा निन्दा गरेका छन्। उत्तर कोरियाली सञ्चार माध्यमका अनुसार, नेता कीमले मुलुकको उत्तरमा निर्माणाधीन परियोजनाको निरीक्षणका क्रममा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले उत्तर कोरियाको सकारात्मक पहललाई अझै बुझ्न नसकेको बताए। ... बाँकी अंश»
ट्रम्पले कर्मचारीलाई भने - पुटिनसँगको साँठगाँठको अनुसन्धानमा सहयोग गर्नू
२०७५ भदौ ३ आइतबार, वासिङ्टन । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले ह्वाइट हाउसका कर्मचारी डन म्याकगान र अरु कर्मचारीलाई गत राष्ट्रपतीय चुनावमा मस्कोसँगको सम्भावित साँठगाँठका विषयमा भइरहेको अनुसन्धानमा सहयोग गर्न आदेश दिइसकेको बताएका छन् । ... बाँकी अंश»
भेनेजुयलाका आप्रवासीलाई इक्वेडर प्रवेशमा रोक
२०७५ भदौ ३ आइतबार, काठमाडौं । इक्वेडरले भेनेजुयलाका आप्रवासीहरुलाई आफ्नो मुलुकमा प्रवेशका लागि रोक लगाउने निर्णय गरेको छ । ... बाँकी अंश»
अन्डरवल्ड डन दाउदका दाहिने हात गिरफ्तार
२०७५ भदौ ३ आइतबार, काठमाडौं । अन्डरवल्ड डन दाउद इब्राहिमका दाहिनी हात जबीर मोती पक्राउ परेका छन् । मोती लन्डनको एक होटलबाट गिरफ्तार भएका हुन् । ... बाँकी अंश»
फिजीमा ८.२ रेक्टर स्केलको भूकम्प
२०७५ भदौ ३ आइतबार, काठमाडौं । फिजीमा ८.२ रेक्र स्केलको शक्तिशाली भूकम्प गएको छ । ... बाँकी अंश»
संयुक्त राष्ट्रसङ्घका पूर्व महासचिव कोफी अन्नानको निधनप्रति विश्वभरबाट शोक व्यक्त
२०७५ भदौ २ शनिबार, जेनेभा, स्वीट्जरल्याण्ड। पूर्व महासचिव कोफी अन्नानको शनिबार भएको निधनप्रति विश्वभरबाट दुःख व्यक्त गरिएका शोक सन्देशहरू प्राप्त भएका कोफी अन्नान फाउण्डेसनले शनिबार जानकारी गराएको छ। ... बाँकी अंश»
टर्की अमेरिकासँग अनावश्यक तर्सिने छैन : एर्दोगान
२०७५ भदौ २ शनिबार, अङ्कारा, टर्की। अङ्कारा र वासिङ्टनबीचको विवाद चर्किरहेका समय अमेरिकासँग नडराउने टर्कीका राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगानले शनिबार बताए। अमेरिकी धर्मगुरुलाई टर्कीले बन्दी बनाएको बिषयले दिनप्रतिदिन विवादलाई साम्य गर्नुको सट्टा थप तिक्ततापूर्ण बनाएको छ। ... बाँकी अंश»
रहेनन् कोफी अन्नान
२०७५ भदौ २ शनिबार, एजेन्सी । राष्ट्रसंघका पूर्वमहासचिव कोफी अन्नानको निधन भएको छ । ८० वर्षीय अन्नानको स्वीजरल्याण्डमा निधन भएको उनको पारिवारिक श्रोतले जनाएको छ । ... बाँकी अंश»
२०७५ भदौ २ शनिबार, केरला । भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले बाढी प्रभावितलाई राहत रकमको घोषणा गरेका छन् । ... बाँकी अंश»
'नत मेरा बुबा वा परिवारले राजनीति गरे, तर मैले जनता सामु बाचा गरेको छु'
२०७५ भदौ २ शनिबार, काठमाडौँ । पाकिस्तानको नयाँ प्रधानमन्त्रीका रुपमा इमरान खानले शनिबार सपथ ग्रहण गरेका छन् । मुलुकको सवै भन्दा ठूलो पार्टी पाकिस्तान तेहरिक ए इन्साफ (पीटीआई)बाट प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार भई विजयी भएका खान पाकिस्तानको २२ औँ प्रधानमन्त्री बनेका छन् । ... बाँकी अंश»